Wax Asxaan Ah Kama Doonayno Man United-Bernardo Silva Oo Soo Bandhigay Aragtida Ciyaartoyda Kooxdiisa City Ee Ka Hor Kulanka Man United vs Liverpool. - GOOL24.NET
Wax Asxaan Ah Kama Doonayno Man United-Bernardo Silva Oo Soo Bandhigay Aragtida Ciyaartoyda Kooxdiisa City Ee Ka Hor Kulanka Man United vs Liverpool.
Axadii la soo dhaafay markii ay kooxaha Manchester City iyo Chelsea wada ciyaarayeen kooxda Liverpool ayaa rajo ka qabtay in City ay dhibco ku lumiso kulankii Blues iyada oo jamaahiirta kooxda Liverpool soo bandhigay dareenka ay ka qabeen in ay Chelsea noqoto kooxda ay asxaan ug aheli kareen koobka Premier League laakiin wixii dhacay ayaa ka dhacay.
Inkasta oo markale ay jamaahiirta Manchester City rajaynayaan in kooxda ay xifiltamaan ee Manchester United ay markooda asxaan ugu samayso in ay Liverpool guuldaro ku bado Old Trafford, haddana xidiga xulka qaranka Portugal iyo kooxda Man City ee Bernardo Silva ayaa fikrad arintan ka duwan soo bandhigay.
Bernardo Silva ayaa muujiyay in ayna kooxdiisu wax asxaab ah ka doonayn Manchester United balse ay diirada saarayaan kaliya kulamada ay kooxdoodu ciyaarayso, wuxuuna ku dooday in xataa haddii ay Liverpool guuldaraysato kulanka Man United ayna micno samaynayn haddii ay kooxdiisa City markeeda guuldarooyin la kulanto.
Balse Bernardo Silva ayaa soo dhaweeyay haddii ay Liverpool guuldaro kala soo laaban doonto Old Trafford iyada oo la filayo in uu noqon doono kulan saamayn wayn ku yeelan kara tartanka koobka Premier league gaar ahaan rajada Liverpool oo loo arko in ay si wayn ugu xidhnaan doonto natiijada kulanka Man United.
Bernardo Silva oo ka hadlaya kulanka Man United iyo Liverpool ayaa yidhi: “Dabcan way ka fiican tahay haddii ay iyagu dhibco ku lumiyaan, laakiin waxaan filayaa in dhamaanatyo oo tababaraha oo kaliya aan ahayn ee dhamaan ciyaartoyda oo dhan ahi aanu diirada saarayno shaqadayada”.
Bernardo Silva oo sababta aanay diirada u saarayn kulanka Liverpool iyo Man United ka hadlaya ayaa yidhi: “Haddii aanaan guulaysan kulamadayada, micno ma yeelanayso waxa ay iyagu sameeyaan, sidaa daraadeed, taas ayaa hadda ah waxa ugu muhiimsan (in ay kulamadooda diirada saaraan)”.
Dhinaca kale Bernardo Silva ayaa ka hadlay saamaynta uu Sergio Aguero kooxdiisa Man City ku soo lahaa isaga oo goolal tiro badan soo dhaliyay wuxuuna yidhi: “Waxaan filayaa in aanad u baahnayn erayo badan oo aad isaga ku qeexdo. Isagu waxa uu todobaadba -todobaadka ka danbeeya ku soo cadeeyay sida uu u fiican yahay, sanadba -sanadka ka danbeeya. Kaliya anaga fantastik ayay noo tahay in aanu gool dhaliye isaga oo kale ah haysano oo goolal badan noo dhalinaya, waxaan rajaynayaa in uu sii wadan doono”.